Fanasan’ny Tompo voalohany taorian’ny fihibohana : 01 novambra 2020 – FJKM Ambavahadimitafo Fanasan’ny Tompo voalohany taorian’ny fihibohana : 01 novambra 2020 |
Fanasan’ny Tompo voalohany taorian’ny fihibohana : 01 novambra 2020
Publié le 02 novembre 2020 à 07:11
Alahady 01 novambra 2020, hibanjinana ny lohahevitra vaovao hoe « Miandrandra famonjena ny mino » eo amin’ny sahan’ny FJKM @ity volana novambra ito.
Nisy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo voalohany taorian’ny fihibohana nanomboka ny volana martsa 2020; ary alahady nitondrana am-bavaka ny sampana Vondrona Fototra Laika ihany koa. Nanatanteraka rakitra manodidina ihany koa ny fiangonana mba ho enti-manana @ fifandraisan-tànana @ mpitandrina Randrianarisoa Alain mianakavy.
Ny Mpitandrina miza-draharaha Razakamanantsoa Narinjaka no nitondra ny hafatry ny Tompo avy ao amin’ny Romana 15 : 7 : « Koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan’i Kristy anareo koa ho voninahitr’Andriamanitra »
Tao anatin’ny fanajàna ny fepetra ara-pahasalamana no nanatanterahana ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo :